शनिबारको दिन झुक्किएर पनि नखानुहोस् यस्ता चिज, नत्र रिसाउनेछन् शनिदेव !:: Naya Nepal
एजेन्सी हिन्दु धर्ममा शनिबार शनिदेवको पूजा गरिन्छ । शनिदेवलाई न्यायको देवताको रुपमा पुजिन्छ । शनिदेवलाई प्रसन्न गर्नका लागि यो दिन सरसियौँको तेल, कालो तिल आदि चढाउने गरिन्छ । जुन व्यक्तिको कुण्डलीमा शनिदोष भएको हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिले शनिदेवको पूजा गर्नुका साथै शनिबारको दिन केही खानेकुरा पनि बार्नु पर्ने हुन्छ । शनिदोष भएका व्यक्तिले भूलेर पनि खान नहुने केही खाद्य वस्तुबारे जानकारी राखौँ ।
३.आँपको अचार पनि शनिबारको दिन नखानु होला । आँपको अचार काँचो आँपबाट बनाइने हुनाले यसको स्वाद अमिलो तथा टर्रो हुन्छ । यस्तो स्वादको खाद्यवस्तु शनिदेवलाई मन पर्दैन । त्यसैले शनिबारको दिन यस्ता खानेकुराबाट टाढा रहेकै बेस हुनेछ ।
४.शनिबारको दिन खानामा रातो खुर्सानी प्रयोग नगर्नु होला । शनिदेवलाई खानामा रातो खुर्सानी प्रयोग गरेको मन पर्दैन । सुकेको तथा रातो खुर्सानी प्रयोग नगर्दा तपाईंलाई शनिबारको दिन लाभ मिल्नेछ ।
सीमान्तीय धुनमा ब्यूँझेका गीत
विश्वमा भोकका बारेमा हुने गरेका बहस, आन्दोलन र प्रतिपादित सिद्धान्तहरू हाम्रातिर जीवनमा भन्दा पाठमा ज्यादा आकर्षित भइरहेकाले हाम्रा पाठ्यपुस्तकहरू दिनदिनै माक्र्स वा ग्राम्चीहरूकै सैद्धान्तिकतालाई पुष्टि गर्नमा केन्द्रित भइरहेछन्। सिद्धान्तहरू आउनुअघि यी व्याख्यानका निम्ति रचिएका पाठ थिएनन्, यी जीवनका आला बचाइहरू हुन्।
मैले कुँदेको मूर्ति देउता हुँदै भएन
आवाज भर्न खोजें स्पर्श नै रहेन
मैले कुँदेको मूर्ति बन्छ मालिक जस्तो
मृत्यु मिचेर हाँस्ने ज्यूँदो सालिक जस्तो !
अहिले हेर्दा त्यतिबेलाका बाल्यकालीन दिनहरू गीतका धुनमा मिसिएर उन्मुक्त हुन खोजिरहेका रहेछन् भन्ने लाग्छ। लय पक्रन खोजिरहेको त्यस उमेरदेखि नै धर्मराज थापाको ‘हरियो डाँडामाथि हलो जोत्ने साथी’ को भाका टपक्कै टिपेकी थिएँ। जेठको हपहप गर्मीमा मकैका बीउलाई डोब बनाउने र असारमा धान रोप्न खेतका गरा हिल्याउन हलोको अनौ दाब्ने नरे र सोमे दाइहरू यो गीत बेजोडले गाउँथे र दिल फुकाएर खेतबारीका बाँझा जमिनबाट माटाको सुगन्ध निकाल्थे। तिनका भाव र भाकाले तानेर हो कि किन हो यो भाका गुन्गुनाउनभन्दा सुन्नमै आकर्षण थियो, तिनका श्रोता वरिपरि झ्याम्मिएकै हुन्थे। हलो जोत्ने ठूले भाटु (दनुवार भाषामा भिनाजु) ले भने कहिल्यै ठूलो स्वरमा बोलेको सुनिएन, उनले गीत पनि कहिल्यै गाएनन्।
बर्खे वा हिउँदे बिदामा गोठाला, घँसिया वा रोपाहारहरूका सामीप्यमा लोकगीतहरूको बेग्लै आभा झुल्थ्यो। स्थानीय परिवेशलाई सजीव बनाउने सांस्कृतिक पर्वगीतहरू नजानिँदो किसिमले मनका बहहरू बिसाइसक्थे। कहिलेकाहीँ आफैंलाई पनि त्यस अनुभूतिसँग मिसिएर बाँच्ने आभास मिलिदिन्थ्यो। तर, सानैदेखि अन्तर्मुखी स्वभावकी भएर होला, यस्तो अवसरमा सरिक भएको कुनै सम्झना छैन। कहिलेकाहीँ गाउँबेंसी गर्दा वा पाक्षिक रूपमा पालो आउने स्कुलको रेडियो–कक्षामा गीतका विविध धुनहरूसँग आत्मीयता गाँसिन्थ्यो। अधिकांश गीत त्यसबेला पाठ्य विषय नै भएर रहे। २०४० को आरम्भतिर घरमा रेडियो भित्रिएपछि भने केही नयाँ धुनहरूसँग पनि परिचित हुँदै जाने अवसर मिल्यो। बंगाली साहित्य पढ्न बढी रुचाउने बुबा हिन्दी र अंग्रेजी भाषाका विभिन्न ब्यान्ड घुमाएर स्टेसन खोज्ने र ती भाषाका प्रसारणहरू सुन्ने गर्नुहुन्थ्यो। यदाकदा बज्ने गीतहरूमा आकर्षित हुन्थें, तर केही बुझ्दैनथें। कतै संगीतका कारणले त तानिइनँ ?
रेडियो भित्रिनुभन्दा पहिले घरमा ‘जनताका गीतहरू’ गीत संग्रह पुस्तकका रूपमा भित्रिसकेको थियो। ‘चौतारीमा राजा भेटिए, चौतारीमा रानी भेटिए’ जस्ता गीतभन्दा पहिले नै ‘संघर्ष हो जीवन, जीवन संघर्ष हो’ गीत पढ्न थालेकी थिएँ। दनुवार भाषाका असारे भाकाहरू त्यहाँको परिवेशमा बग्न थालिसकेका थिए, ‘तरकारी खाइलै नैसाराकु जैलै लाखै तोलाई मंसिरमा…’ शैलीका श्रम र प्रेमको मीठो मिश्रण भएका प्राकृतिक गीतहरू मेरानिम्ति पनि हुर्काइका पृष्ठभूमि मात्र होइन, जीवनशैली नै बनेका थिए। त्यसबेला केवलपुरे किसान र जनकप्रसाद हुमागाईंका वर्गीय चिन्तनका गीतहरू हाम्रा खेतहरूमा ब्यूँझिसकेका थिएनन्। बरु रामेश–मञ्जुल, श्याम तमोट, रायन, प्रश्रित, जीवन शर्माद्वारा लेखिने प्रवृत्तिका गीतहरूले पञ्चायती काइदाका हाम्रा पाठयपुस्तकका पृष्ठबाहिर कैयन् अन्य पृष्ठहरू थपिसकेका थिए, हामी लुकीलुकी ती वर्गीय चेतना र मुक्तिका स्वरहरू आधा मात्र बुझे पनि कौतूहलसाथ पढ्थ्यौं।
त्यस समयको प्रभाव सम्झँदा अहिलेका कतिपय गीतहरू भाव र लयले छिन्नभिन्न भएका हुन् कि जस्ता लाग्छन्, वस्तुताभन्दा विवशता घनिभूत भएपछि कलाको धुन सिद्धान्तविपरीत बग्दो रहेछ। ती दिनहरू गीतका हिसाबले अनन्त वैभवका दिन थिए। तिनका भयभित्रका सुन्दरता वर्तमानमा खोजेर पनि भेटिरहेका हुँदैनौं सायद !
भोकै मर्ने महाकविका पेटका सारंगीहरू
नांगै मर्ने गाइने दाइका झुत्रा लुगाहरू
भोकाप्रति यतिविघ्न श्रद्धा गीतकार मञ्जुलको यही गीतले जगाइदिएको थियो। भोकप्रति त्यति नै प्रतिशत घृणा पनि सायद त्यहीँदेखि सुरु भएको हो ! भोक र मरणबीच जति अन्तराल छ, यी गीतहरू त्यही समयका प्रतिविम्ब हुन्। विश्वमा भोकका बारेमा हुने गरेका बहसहरू, आन्दोलनहरू र प्रतिपादित सिद्धान्तहरू हाम्रातिर जीवनमा भन्दा पाठमा ज्यादा आकर्षित भइरहेकाले हाम्रा पाठ्यपुस्तकहरू दिनदिनै माक्र्स वा ग्राम्चीहरूकै सैद्धान्तिकतालाई पुष्टि गर्नमा केन्द्रित भइरहेछन्। सिद्धान्तहरू आउनुअघि यी व्याख्यानका निम्ति रचिएका पाठ थिएनन्, यी सर्वथा जीवनका आला बचाइहरू हुन्। हामीले आयातीत सिद्धान्तका घेरामा कतै जीवनका हाम्रा आफ्नै बचाइहरूलाई बिनामूल्य निर्यात त गरिरहेका छैनौं ? श्रम र जीवनमा सँगै हिँडेका हाम्रा गीतहरू नत्र कसरी यति पातला भइरहेछन् ?
बाहिर जति नै चर्को ध्वनि सुनिए पनि प्राकृतिक स्पर्श गर्न नसक्नुका पछाडि हामीले अवलम्बन गरेका संक्रमित धुनहरूले हाम्रा गीतका शब्दहरूलाई अर्थहीन बनाउँदै गएका त होइनन् ? बेलाबखत मनमा यस्ता प्रश्नहरू उठ्ने गर्छन्। अनगिन्ती प्रश्नका भीडबाट छेउ लागेपछि मात्र गीतका खास भावहरूले पछ्याउन थाल्ने रहेछन्। एकान्तमा मनको भित्री तहबाट ब्यूँझने तिनै भावहरू त हुन्, जसले मान्छेको दुःखलाई निःसर्त सम्बोधन गर्ने गर्छन्। चेतनाले तरल रूप लिएपछि अग्लो र होचोको परिमापन आफैंमा आवश्यक कुरो नहुँदो रहेछ। भोकमाथि रचिएको उल्लिखित गीतले सम्बोधन गरेजस्तै महाकवि र गाइनेको भोक एउटै हो। अरू विधामा झैं रचनाकारिताका दृष्टिले गीतका पनि आफ्नै परिवेश र पृष्ठभूमि, घटना र चेतना हुन्छन्। उमेरअनुसार तिनको छनोट पनि हुन्छ। जुन गीतले व्यक्तिबाट समाजलाई देखाउँछ, वर्तमानबाट विगतलाई उभ्याउँछ र मान्छेका सपनालाई पसिनाको सुगन्धबाट हेर्न लगाउँछ, त्यस्ता गीतहरू मानिसका सिरानीबाट उम्रन्छन् र हृदयमा फक्रिन्छन्। उमेरका हाँगाबाट नझरेका पात भएका त्यस्ता गीतहरू हाम्रा स्थानीय श्रमका हरित सपनाहरू हुन्, जसको स्रोत र सामथ्र्यले निर्माण गरेको त्यस युगका साक्षी हामी आफैं पनि रहिआएका छौं।
जनताका गीतहरूको रागले बेहदसँग च्यापेको आफ्नो त्यो अपत्यारिलो उमेर सम्झन्छु। जनमत संग्रहको तातो परिवेश थियो। एकजना प्रौढ छिमेकी घरमै आए, स्कुल छुट्टीको दिन थियो त्यो। बुवासँग राजनीतिका दिवाकालीन तातो बहस चलाउन आएका थिए सायद। आठ वर्षको उमेरमा टेक्दै थिएँ। सोधे, ‘भोट कसलाई दिन्छेस् ?’ उनको त्यो कस्तो कुण्ठा थियो, जो मेरो उमेरसँग मेलै नखाने प्रश्न तेस्र्याउनमा आनन्द मानिरहेका थिए ! ‘जसलाई मन लाग्छ, उसैलाई दिन्छु।’ सायद उनको रिसको पारो निकै माथि चढेछ, घरदेखि निकै पर पाँचखालमाथिको आकाशमा प्यारासुटबाट सैनिकहरू खसालिरहेको दृश्य देखिँदै थियो, त्यसैतिर संकेत गर्दै तिनले भने, ‘तिमेरू जस्तालाई ठीक पार्न आउँदै छन् तिनेरु !’ आफू अलिकति पनि विचलित नभएको त्यो घटना तत्कालीन समयको गीति चेतनाको प्रभाव ठान्छु। स्वतन्त्र हुने त्यो चेतना त्यतिबेला अग्रजहरूद्वारा स्कुलमा गाइएका गीतहरू र प्रहरीका सम्भावित दमनको पर्वाह नगरी रात्रिकालीन जटिल परिवेश झेलेर मञ्चन भइरहेका मुक्ति–नाटकहरूबाट पाएँ हुँला, जुन लुकीलुकी सुन्ने र हेर्ने अवसर बेलाबखत मिल्ने गथ्र्याे।
त्यसबेला थाहा थिएन, प्रतिबन्धका कडा पहराबीच पनि ती गीतहरू कसरी गाउँगाउँ पुगे, कताबाट झरे बस्तीबस्तीमा ! स्कुलको बाटोभरि एकाबिहानै गुञ्जिन आइपुगेका ती गीत बस्तीका ओसमाथि धुवाँसहितको आगोझैं तिक्खर थिए। पुस्तकका पत्रपत्रमा च्यापिएर ती गीतहरू पछि घरभित्रै प्रवेश गरे। अँध्यारामा बसेर सुनेका ती गीतहरूमा यति धेरै उज्यालो कसरी प्रवाहित भयो ! बन्देजका ती दिन सम्झेर, त्यो परिवेश सम्झेर ती गीतका संवाहकहरूप्रति अहिले पनि श्रद्धा गर्छु। मेरा उमेरका मानसलाई ती गीतहरूले नै कैयौं कदमअघि हिँडाएका हुन् भन्नलाई अहिले सोचिरहनु पर्दैन।
ती दिनहरूमा दुई किसिमका गीतहरूको एकसाथ असर थियो— एकथरी आमाहरूको चेतनाबाट ब्यूँझेर कथ्य शैलीमा आएका पाठ्य गीतहरू थिए, जो गृहस्थीका विविध व्यावहारिक सन्दर्भमा प्रयोग गरिन्थे। मुनामदनका श्लोक, त्यसमा पनि अझ ‘हातका मैला, सुनका थैला…’ र ‘मानिस ठूलो दिलले हुन्छ…’ जस्ता पंक्तिहरू। आमाका निम्ति ती गीत अत्यन्त प्रिय थिए, यिनैका सूक्तिबाट आमाहरूको जीवनदर्शन व्यावहारिक बन्न सकेको थियो। अर्काथरी स्वाद क्रान्ति, मुक्ति र परिवर्तनसँग सम्बद्ध थिए, आफू हुर्किरहेको समाजका भोगाइसँग ती मिल्दैनथे भने तिनका अर्थमा प्रवेश गर्नसक्ने स्थिति कुनै पाठक या श्रोतामा रहने थिएन। सिद्धान्तजस्तो गरेर गाउँ पसेका गीतले गाउँमै श्रम, असमानता, विभेद, यातना, उत्पीडन, आँसु र संघर्षका लेखिन बाँकी हजार पाठसँग आत्मसात् गरेका थिए। मानिसका सपनाहरू कति फराकिला हुन्छन् तर त्यही सपना मानिसभित्रको मानसिकताले गर्दा कति सीमित पनि हुन्छन् भन्ने बुझ्न एउटै घर र एउटै गाउँका दृष्टान्त नै काफी थिए। कतिपय दृष्टान्तको साक्षी म स्वयं थिएँ, त्यही गाउँ–समाजको सेरोफेरोमा सुसाइरहेको सुनकोसी, इन्द्रावती, झिकु र नाम्दी खोलाहरूको आँसु र चट्टानका गीतहरू त्यहाँको दैनिकी थियो। किशोरहरूले एकाबिहानै स्कुलको बाटोमा गुन्गुनाउन सिकेको एउटा गीत आमा र भाउजूहरूले घाँसको भारीसँगै फुकाउन थालेका थिए ः
कति बस्छौ दासी भई
सुखको सधैं प्यासी भएर…
बम देवान र एकदेव ज्ञवालीको रचना र जेबी टुहुरेको गायन रहेको यस गीतले ल्याएको सामाजिक क्रान्तिको सही व्याख्या आजसम्म हुनसकेजस्तो लाग्दैन। परिवर्तनका निम्ति आत्मस्वीकार्य भावको यस भाकामा प्रयुक्त आमा, दिदी र बहिनीको अर्थसँगै दास र प्यासको प्रतीकात्मक अर्थ खोज्नमा त्यसरी नै धेरै समय बगिसकेको छ। शब्दकोशले नभ्याउने ती अर्थहरू आज पनि कतिपय परिस्थितिमा अधिनस्थ नै छन्। त्यसयता अनेक सन्दर्भले गीतका भावहरूलाई विस्तृत बनाउँदै लगेका छन्। स्वदेश र विदेशका घटनाक्रमहरूमा, आन्दोलन र प्रतिकारका प्रतिरोधी आवाजहरूमा र मानवीय संवेदनाको अतल खोजीहरूमा ती प्रारम्भिक चेतनाका गीतहरूको स्थान र स्थिति उजागर हुँदै आइरहेका छन्। हाम्रा गीतहरू कहिल्यै मौन रहेनन्। शान्त र स्निग्ध प्रकृतिभित्र छट्पटाइरहेका मानिसका पेटका कथा हीरा गाइनेनीदेखि हरिदेवी कोइरालाहरू हुँदै त्यसयताका असंख्य जीवन–गायकका गीतले समाजका किनारीकृत आवाजहरूलाई वाचाल बनाइआएका छन् :
हलीदाइले हलो जोत्यो मुटु धसी धसी
मुखियाले थैलो थाप्यो घरै बसी बसी।
उधार्दा नि धर्ती पाटो सारंगी भो पेट
भिजे कति पसिनाले खोरिया र खेत।
दमनको विद्रुपताबाट मुक्ति खोज्नु हाम्रा एकखाले गीतका संकल्प हुँदै आए। स्वच्छन्द प्रकृतिमा विचरण गर्ने किशोर ती दिनहरूमा भोकका गीतहरूले भने हृदय भिज्ने गरी पछ्याउँथे। सत्तापक्षका हुंकारहरूलाई चुनौती दिने त्यस्ता गीतहरू स्कुले उमेरका उत्सुकतालाई बेग्लै उत्प्रेरणा दिइरहेका हुन्थे। संवेदनाका गायकहरू खास सीमान्तीयको आँगन टेक्न नपाउँदै पहाडबाट हुरीले लखेटेको बादलजस्तो गायब पारिन्थे। फेरि अर्को हुरीको पर्खाइ रहन्थ्यो। हामी केही नबुझेर पनि बुझेको अभिनय गथ्र्यौं। नजानेर पनि जानेको आभासमा हुन्थ्यौं। हाम्रा गीतहरू कहिल्यै सीमान्तीय भएनन्। यस्ता शक्तिशाली गीतहरूलाई आवाजविहीनका ढोकाभित्र प्रवेश पाउन बरु सहज भएन। आजपर्यन्त प्रतीक्षारत ती गीतहरू ढोका खुले पनि सँघारमै उभिएको आभास भइरहन्छ।
प्रेमका गीतहरूलाई वर्गीय असमानताका घोचाइहरूले हतास बनाउन थालेपछि प्रेमगीतका भाव र भाका दुवै अहिले फेरिँदै गएका छन्। स्वदेशको बेरोजगारी र परदेशका यातनाका पंक्तिहरू मानवीय संवेदनालाई छोएर कहिल्यै सकिँदैनन्, बरु तिनका छुवाइहरूले लिने आकारमा दुःखका अनेक दृश्य अंकन भई आउँछन्।
गीतहरू त्यसबेला शक्तिशाली थिए। निकै परबाट गर्जिएर पनि तिनका प्रभावशाली झिल्काहरूको असरदार चम्काइ थियो ! गायकयात्रीहरू गीतमा समानताको सन्देश बोक्थे। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, गोपालप्रसाद रिमाल, युद्धप्रसाद मिश्र आदिका गीतले स्वतन्त्रताका निम्ति पहिलो आन्दोलनदेखि नै जुन भूमिका दिएका थिए, त्यो यथावतै थियो। अगमसिंह गिरी, गोपाल योञ्जन, हरिभक्त कटुवाल, अम्बर गुरुङ, कालीप्रसाद रिजाल, क्षेत्रप्रताप अधिकारी, नीर शाह आदिका प्रतीकात्मक गीतहरूको विश्लेष्य परिवेश सिर्जना भइसकेको थिएन। रक्तिमका गीतहरू असमानताका विरुद्धमा क्रान्तिलाई आह्वान गर्थे। स्कुल र युनिभर्सिटीबाट खेतका गरामा छरिएको क्रान्तिको घाम सबैले बोके तर अहिले ताप्ने बेला फेरि अहिले गीतहरूका अर्थमाथि घात भइरहेको महसुस हुँदै छ।
पर्खिबसें आउला भनी मेरो उठ्ने पालो
कुर्दाकुर्दै जिन्दगी नै भइगएछ कालो…
किशोर सपनाहरूको उत्तराद्र्ध समय थियो त्यो। अधिकांश बिहानहरू यो र यस्तै गीतहरूसँगै ब्यूँझन थालेका थिए। यो ब्यूँझाइसँगै हाम्रा खडेरी समय गीतको गाग्री बोकेर पँधेरा पुग्थे, गाग्रीभरि गीतै उबाएर फर्कन्थे। घर पुगेर काखीबाट गग्रेटोमा नसारुन्जेल त्यो कोखाको गीत हुन्थ्यो ! बिसाएको गीत अम्खोरामा भरिएपछि मात्र त्यो पानी बन्थ्यो। केत्लीमा भरिँदा चिया बनिसक्थ्यो। कसौंडीमा दाल उम्लिने त्यही श्रमको गीत नै थियो। बुबाले मस्काइरहेको भाँडाको टल्काइमा सबैभन्दा धेरै प्रकाशित हुने गथ्र्यो त्यो गीत। त्यस्तो अप्रचलित धुन र पाठले अभिजात्य पितृसत्तालाई चुनौती दिइरहेको हुन्थ्यो।
मूलतः आर्थिक किनारीकरणको महाप्रलयमा दबिएको हाम्रो समाजमा केही समुदाय निकै पिछडिएका थिए भन्ने सायद धेरैले बुझ्न चाहेको विषय बनिसकेको थिएन। त्यसमा पनि अझ दलित भनिएकाहरूमा क्षमाशील रहने अननुमाप्य सामथ्र्य देखिन्थ्यो। हामी बाँचेको समाजमा यस्तो व्यावहारिकताको अपेक्षा किन निरन्तर रहिरह्यो, यो रहस्यमै राखिएको विषय थियो त्यस समय। अधिनस्थहरूको पसिना आफ्नै भावना र संवेदनाका पछ्यौरीले पुछ्नुपर्ने चेतना ग्रहण गर्दै गरेका किशोरकालीन ती आवाजहरू मौनतापूर्वक सुन्नेहरू नै धेरै थिए।
काठमाडौं प्रवेश गरेपछि नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको प्रेक्षालयमा मालती मंगले गीति–नाटक हेरें। दासत्वको निर्मम र नियतिको क्रूर अनुभूतिले मुटु पहिलोचोटि चर्किएजस्तो भएको थियो। यसपछि आफ्नै अनुभूतिको पनि सैद्धान्तिकीकरण गरिने क्रमको आरम्भ भयो भन्ने लाग्छ। गीतको असरतिर अग्रसर हँुदा गीतमा भाव र लय दुवै बराबरी रहेको होस् भन्ने कामनासहित धेरै गीतकारका गीतहरू खोजी खोजी पढिए । ज्यान नभएका शब्दहरूलाई संगीतले मात्रै ब्यूँझाउन सक्दैन भन्ने मान्यताको निरन्तरतामा एउटा सशक्त गीत सुन्ने अवसर मिलेको थियो :
रातको सपना बाँकी हुन्न बिहानीमा उठ्दा
जुनीभरि जुत्ता भइयो खाली रह्यो खुट्टा…।
कवि तीर्थ श्रेष्ठको यो गीत सुन्दासम्म समकालीन नेपाली गीतमा अरू पनि विभिन्न थरीका सपना र सिँढीहरू थपिइसकेका थिए। पुरानै गीतहरू पनि नयाँ अर्थले ध्वन्यात्मक हुन थालेका थिए। ओठले बाटो मागेका ती कैयन् गीतहरू नेपाली गीतले आफैंभित्र सुगन्धजस्तो जोगाएको रहेछ। तीर्थ श्रेष्ठ, भूपाल राई, कृष्णहरि बराल, श्रवण मुकारुङ लगायतसँगै फैज अहमद फैजलाई समेत पढिरहँदा गीतको शक्तिले हृदयलाई मस्तिष्कसँगको चरम स्पर्शमा पुर्‍याइरहेको हुन्थ्यो। त्यसैताका गीतकार दिनेश अधिकारीका केही गीत वर्गीय आँसुको अर्थ खोज्दै आए :
पसिनाको चम्को उठाउने
छैन भने सातु–सामल
कुरै त हो बाटो कटनी !
नारी संवेदनालाई पनि उनका केही गीतले छोएका छन्। तीज–तिहारको साँगुरो परिवेश नाघेर समाजका अन्य पक्षबाट नारी शोषणका विरुद्ध आवाजहरू उठ्नु सकारात्मक पक्ष हो, राजनीतिक परिवर्तनसँगै यात्रामा निक्लेको लैंगिक समानतामुखी गीतिचेतना व्यावहारिक रूपले अर्को किनारमा पर्नु निश्चय नै समाजका निम्ति अग्रगामी सोच होइन।
प्रेमका गीतहरूलाई वर्गीय असमानताका घोचाइहरूले हतास बनाउन थालेपछि प्रेमगीतका भाव र भाका दुवै अहिले फेरिँदै गएका छन्। स्वदेशको बेरोजगारी र परदेशका यातनाका पंक्तिहरू मानवीय सम्वेदनालाई छोएर कहिल्यै सकिँदैनन्, बरु तिनका छुवाइहरूले लिने आकारमा दुःखका अनेक दृश्यहरू अंकन भई आउँछन्।
पसिनासँग सजातीय सम्बन्ध बाँचेको जीवनका उकाली ओरालीहरूमा यी र यस्तै वर्गीय प्रेम र पीडाले भरिएका गीतहरूले धेरैपटक सहयात्रा गरेका छन्। नदीका नागबेली बगरहरूमा ढुंगा टुक्य्राएर गिट्टीको पहाड बनाउने दिदी–आमाहरूका पिठ्यूँमा हाँसिरहेका बालक हुन् वा दलितका सन्तान भनिएर स्कुल भर्ना हुन नपाएका बालक हुन्, पसिना बगाउन ती अहिले कुन मुलुक पुगेका होलान् ? खाडीको कुनै सपिङ सेन्टरमा पसिना बगाइरहेका बा–आमाहरू पिठ्यूँमा आफ्ना बालकलाई बोकेको सपना देखेर झस्किरहेका होलान् ! सिद्धान्तका पत्रपत्र पल्टाउँदा बेफुर्सद छ अहिले हामीलाई ती कथाहरूसँग रुन–हाँस्न। तिनका पाठ बिर्सिइँदै जाँदो पो रहेछौं। वर्तमानको महाभाष्यले सीमान्तीयको नयाँ परिभाषा माग गरिरहेका बेला हामी पुरानै सिद्धान्तका खोलमा हाम्रा चेतनाहरूलाई बेरिरहेका पो छौं कि ! सरकार र जनताबीच सैद्धान्तिक सामञ्जस्यको निम्ति दूरी कम देखिए पनि व्यवहारबीचको यो चरम विषमता केका निम्ति भन्ने प्रश्न उत्तिकै सान्दर्भिक छ। सत्ताको आत्मप्रदर्शनीका प्रतिरोधमा उत्रिएका यी समकालीन गीतहरू नयाँ निषेधको बहुअर्थमा छेलिएका छन्।
हप्प उठेको यो भदौरे गन्धभित्र अक्षरहरू टुसाउन निकै कठिन भइरहेछ। सम्झन्छु, कठिनाइ त त्यसबेला पनि थियो— गर्मी झेल्दाझेल्दै आफैं कतिपटक भदौ भइसकेका गाउँले किसानसँग धेरैपटक जम्काभेट भएको थियो ! आमाको यादसँगै हृदय बटारिने सम्झनाका ओरालीहरूबाट बेंसीतिर दौडिरहँदा पनि देखिन्थे, श्रमका बालाहरू फेरि पनि बाटाका दुवैतिर उसरी नै नुहेका छन्। पर देखिने क्षितिजमा बादलभन्दा बढी असारका गीतहरू लहराएर उठ्दै छन्। अनि कठिनाइको अर्थ पनि सापेक्ष लागिदिन्थ्यो !
केही दिनयता अतीतका ती अर्थपूर्ण गीतहरू फेरि ब्यूँझन खोज्दै छन्, अक्षरमाथि टुसाउँदै गरेको हरियालीमा उभिएर ती सीमान्तीय धुनहरू किशोर आभामा छरिँदै छन्। साहस र सौर्यको त्यस सपनामय स्मृति, एकपटक ब्यूँझिने प्रयत्न गरिरहेछ।